Ukukhanya kwesikhukula kukukhanya okubanzi, ukukhanya okuphezulu okwenziweyo. Oku kukhokelwa kukukhanya kwezikhukula kunandipha uyilo, oluncinci kunye nobuhle obuhle obamkelekileyo ekubunjweni kwezinto zealuminium. Umbala weqokobhe ngokubanzi umnyama omnyama, kwaye umbala ungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno.
I-Luminaires iya kukhuselwa emanzini kwaye ifezekise i-IP65 kwinqanaba lokukhuselwa okuphezulu. Inokuphumeza iziphumo ezifanayo zokukhanyisa, iziphumo zokukhanya kwezikhukula ezikude kwaye zisetyenziswa ikakhulu kwi -Ideal yokusetyenziswa kwangaphandle nangaphandle, ukukhanyisa ikhaya, igadi, igaraji, ingca, ngaphambili nangasemva kweyadi kunye nentengiso yokwakha kunye nolwakhiwo olukhulu.
Ukucaciswa kweeparameter ezibonakalayo:
Ubushushu 1.Color: Standard ubushushu umbala kuluhlu 3000-6500K, ukuhlangabezana neemfuno ukukhanya efudumeleyo kunye nokukhanya abandayo kulungile.
Ingelosi ye-2: I-angle ye-120 ° ye-beam angle, i-shadow-free kunye ne-anti-glare, ukubonelela ngokukhanyisa ngokufanelekileyo kwindawo yakho enkulu. Isibiyeli sesinyithi esiguquliweyo senza ukukhanya kuzinze.
Ubomi 3.Source: ngaphezulu ngoko 30000H
Umbane wokufaka: 220-240V, 50HZ
Amandla alinganisiweyo: 10w / 20w / 30w / 50w / 100w (Kufuneka amandla aphezulu abe ngumbuzo nangaliphi na ixesha)
Ukubhobhoza 3.Luminous: 85LM / W.
Izinto 1.Base: die-ekubunjweni aluminium kunye iglasi Wobulali
Ubungakanani be2. mm
I-1.Long-Lifespan kwaye kulula ukuyifaka: I-Groove Radiator kukunyusa indawo yokunxibelelana nomoya, ukukhawulezisa ukusasaza kobushushu, ngaloo ndlela kwandisa ukukhanya kwezibane.Ngobunzima bentsimbi obuqinileyo nolungelelanisiweyo, ukukhanya komsebenzi ongaphandle kunokuxhonywa eludongeni, eluphahleni okanye emhlabeni.
2.Umbane kunye nokugcina amandla: Izibane zezikhukula ze-LED zinokuvelisa ukuya kuthi ga kwi-8500lm ukukhanya; kwaye emva koko iya konga ngaphezulu kwama-75% ombane, kukusetyenziswa okungaphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nezibane zangaphandle zemveli ze-halogen, akusekhoxhala malunga neendleko zombane eziphezulu.
Nika wonke umthengi iwaranti yeminyaka emi-2. Siyakholelwa kumgangatho weemveliso zethu kwaye siqinisekisa uphawu lwethu. Sizixabisile izimvo zabathengi bonke kwaye sinika wonke umthengi ngenkonzo esemgangathweni emva kokuthengisa.
Egqithileyo X Series Floodlight Nge woluvo Microwave
Okulandelayo: Ukukhanya koMkhukula oKhanya nge-Pir Sensor
Ukukhanya koMkhukula weBluetooth
Izibane zeMkhukula zangaphandle
Ukukhanya koMkhukula weTuya
Ukukhanya koMkhukula weWifi